Kenya: Maxkamad diiday qodobo ka mid ah sharciga argagixisada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maxkamada sare ee Kenya ayaa go’aan ku gaartay in dastuurka ay ka soo horjeedo dhowr qaybood oo ka mid ah sharciga cusub ee ammaanka.
Siddeed qaybood ayaa laga bixiyay sharciga oo ay ku jirto in xoog loo ilaaliyo warfaafinta, iyo in xad loo yeelo qaxootiga waddanka soo galaya.
Sharciyada kale ayaa waxaba laga badalin sida in qofka argagixiso looga shakisan yahay uu xirnaan karo ilaa sanad iyadoo maxkamad la keenin, halka uu awal ka ahaa sagaashan maalmood.
Dowladda ayaa sheegtay sharciga oo December la soo saaray in loo baahan yahay in looga hortago qatarta Alshabaab.
Dhanka kale, dowlada Germany ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay sidii ay dowlada Kenya uga caawin lahayd dagaalka ay kula jirto kooxaha loogu yeero argagaixisada, kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo ka sameeya qeybo ka mid ah gudaha dalka.
Wasiirka arimaha dibada ee jarmalka Walter-Frank Steinmeier ayaa sheegay in ay taba baro ugu deeqi doonaan ciidamada amaanka ee dalkani Kenya.
Mr Steinmeier ayaa hadalkaan sheegay xili uu kulan labada geesood ah la yeeshay wasiiradda arimaha dibada ee Kenya Amina Mohamed oo dhigeeda ku qaabishay magaalada tan Nairobi.
Ambasador Amina ayaa dhankeeda sheegtay in qalalaasaha xagjirnimada uu dib u dhac ku keenayo hab sami u socodka dhaqaalaha iyo siyaasada dalka iyo guud ahaan gobolkaba.
Mrs Amina ayaa dhanka kalena cambaareysay weerarkii jimcadi lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia, halkaasoo lagu dilay ku dhawaad 25 ruux oo ay ku jireen masuuliyiin ka tirsan dowlada iyo xildhibaano.
Arintaan ayaa kusoo aadeysa xili wasiirka arimaha gudaha iyo amniga qaranka Joseph Nkaissery uu isna ka qeyb galayo shir looga hadlayo la dagaalanka argagaixisada oo ka socda magaalada Washington ee dalka Mareykanka.
Madaxweyne Geelle “Alshabaab meel ay Itaal u leeyihiin oo ay ku weerari karaan ma jirto”